Ukuma Kwezombusazwe zamaTsonga
Njengabaqolonti abamhlophe babebeka umthetho wabo emadolobheni aseTonga, amandla amakhosi ayenqaba. Ngama-1920 abaningi labamhlophe babona ukuhlukaniswa kombusi ngezimiso zokungabi namthetho wezomthetho. Abase-Segregationists babona 'isizwe' njengezwe 'lemvelo' abantu base-Afrika abangene emncintiswaneni owandayo nalabo abamhlophe ezindaweni zasemadolobheni.
Isikhundla sekhanda wasqiniswa ngomthetho ka-1920 kanti eminyakeni engama-30 kamuva, 'izikhulu zezwe' zaba zibaluleke kakhulu kwiBantustan. Ngokwesiko inhloko (hosi) kanye nomkhandlu wakhe unamandla okugcina futhi okwamanje yakha ingxenye ebaluleke kakhulu kuhulumeni kuzo zonke iziTsonga.
Ubukhosi buyithenga futhi buyela emphakathini omkhulu kunazo zonke zomndeni omdala kunabo bonke emkhayeni oqine kakhulu kuleli qembu. Inhloko entsha kufanele ivunyelwe ku-council futhi ifakiwe esikhundleni. Uma kufanele abe yincinjana ekufeni kukayise, umntanakhe omncane ngokuvamile usebenza njenge-regent.
Esikhathini esidlule le ndawo yayisetshenziswa amandla amakhulu. Wanikeza umhlaba futhi wavuma ukuqala kwemikhosi yokuqala, isivuno semikhosi kanye nemvula yamanzi; wabeka phakathi kwamalungu eqembu kanye nemimoya yamakhokho; wenza zonke izinqumo eziphathelene nempi kanye nebutho; Ubephethe isiphathimandla, futhi wazama icala elikhulu kanye nalabo abancenga abaphathi. Amasevisi amakhulu akwenza imisebenzi ekhethekile.
Namuhla izinduna zikhokhwa izinceku zomphakathi ezinomthwalo wokuphatha abantu abangaphansi kwazo. Kumele baqoqe intela futhi baqaphele imisebenzi efana nokwabiwa kwamanzi noma ukuhlanganiswa kwezinkampani ezintsha. Baqhubeka badlala indima ebaluleke njengezikhungo zokuthembeka, ukwazisa kanye nokuthanda umphakathi wakuleli.